မိဘတွေ အထီးကျန်တဲ့အခါ ခံစားလာရတဲ့ Empty Nest Syndrome ဆိုတာဘာလဲ ? - Lifestyle Myanmar
နိုင်ငံခြားသားတွေ မကြားဖူးတဲ့ တောင်ကိုရီးယားနှင့် ပတ်သက်သော စိတ်ဝင်စားဖို့ ကောင်းတဲ့အချက်များ
Ambivert တယောက်ရဲ့ ထူးခြားတဲ့လက္ခဏာတွေနဲ့ အပြုအမူများ
ဆံပင်တွေ အရမ်းကျွတ်ပြီး အကွက်လိုက်ပြောင်ခြင်းကို ပြန်ကောင်းစေမယ့်နည်းလမ်း (၈)ခု
မိန်းကလေးတိုင်းအတွက် မရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့ အတွင်းခံဘောင်းဘီအမျိုးအစား (၅) မျိုး
အမှန်တကယ်ပျော်ရွှင်နေသူတိုင်းသိတဲ့ လျှို့ဝှက်ချက် (၁၀) ချက်
ကမ္ဘာ့အနှံ့အပြားက အရွယ်အစားအလွန်ကြီးမားတဲ့ ထူးဆန်းအံ့ဩဖွယ်ရာများ
သင့်လက်တွဲဖော်မှာ စိတ်ခံစားမှု မရင့်ကျက်သေးတဲ့ လက္ခဏာ (၁၁)ခု
အမျိုးသားတွေ propose မလုပ်ခင်မှာ ဂရုတစိုက်စောင့်ကြည့်တတ်သော အမျိုးသမီးတွေရဲ့ ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေး (၁၀) ချက်
Squats ထိုင်ခြင်းကြောင့်ရရှိနိုင်တဲ့ အကျိုးကျေးဇူးများ
in Lifestyle, Lotaya, Relationship
မကြာသေးမီအထိ သင့်အိမ်လေးဟာ သားသမီးတွေနဲ့ ဝေဆာနေပြီး သူတို့ကို ကျွေးမွေးပြုစုခြင်း၊ သူတို့ရဲ့ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းတွေ တည်ဆောက်ပေးခြင်းနှင့် အမှီအခိုကင်းစွာ ဘယ်လိုနေထိုင်ရမလဲဆိုတာကို ပြသခြင်းဖြင့် သင်အလုပ်များနေနိုင်ပါတယ်။
သို့သော် ယခုအချိန် သင့်ကလေးတွေ အတောင်အလက်စုံလာတဲ့အခါမှာ အထီးကျန်သလို ခံစားလာရပါပြီ။ သင့်ဘဝရည်မှန်းချက်တွေ ပြီးမြောက်သွားတာကို သင်စိတ်ကျေနပ်နိုင်သော်လည်း သင့်ရဲ့ ဘာမှမရှိတော့တဲ့ အသိုက် (အိမ်)လေးကို ကြည့်ခြင်းက သင့်အတွက် စိတ်မချမ်းမြေ့စရာ ခံစားရစေပါတယ်။
Empty Nest Syndrome ဆိုတာဘာလဲ?
Empty Nest Syndrome ဆိုတာက ကလေးတွေ အတောင်အလက်စုံလို့ အိမ်ကနေ ထွက်ခွာသွားတဲ့အခါ မိဘတွေမှာ ခံစားရတဲ့ ဆုံးရှုံးမှုနှင့် စိုးရိမ်စိတ် ခံစားချက်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ Empty Nest Syndrome ရဲ့လက္ခဏာတွေက များသောအားဖြင့် စိတ်ကျရောဂါ၊ စိုးရိမ်ခြင်းတို့နှင့် ဆက်နွယ်နေပါတယ်။ ဥပမာ- သင်ဟာ စိတ်လှုပ်ရှားမှု၊ အထီးကျန်ဆန်မှုနှင့် ပဋိပက္ခဖြစ်နေတဲ့ စိတ်ခံစားမှုတွေကို ကြုံတွေ့ရနိုင်ပါတယ်။ သင့်ကလေးရဲ့ အိပ်မက်တွေ ပြည့်စုံလာတာကို ဝမ်းသာပေမယ့် သူတို့ ကိုယ်နဲ့အတူမနေတော့အတွက် အရမ်းဝမ်းနည်းတာမျိုး ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ တစ်ခါတလေ သူတို့ပြင်ပလောကမှာ ကောင်းစားသွားမှာကိုတောင် ကြောက်ရွံ့မိနိုင်ပါတယ်။ ဒီခံစားချက်တွေ ကြုံနေရတဲ့သူကို empty nester လို့ခေါ်ပါတယ်။
အချို့သော မိဘတွေဟာ အိပ်မက်ဆိုးတွေကိုတောင် ကြုံတွေ့ရနိုင်ပါတယ်။ ကလေးတွေ အိမ်မှာမရှိခြင်းကို လက်ခံဖို့ သူတို့အတွက် ခက်ခဲတာကြောင့် အိပ်မပျော်တာကိုခံစားကြရပါတယ်။ အချို့က ကိုယ့်ကလေးအတွက် ကောင်းကောင်းမလုပ်ပေးလိုက်ရဘူးလို့ ထင်ကောင်းထင်နိုင်ပြီး အပြစ်ရှိသလို ခံစားရနိုင်ပါတယ်။
Empty Nest Syndrome ဟာ single parent တွေကို ပိုပြီးဆိုးကျိုးသက်ရောက်နိုင်ပါတယ်။ သူတို့မှာ ငွေရေးကြေးရေးအရကော၊ ရုပ်ပိုင်းနှင့် စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအရပါ တစ်ယောက်တည်း ကျန်ခဲ့သလို ခံစားရတာကြောင့် ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါက ဆေးကုသရမယ့် ရောဂါတစ်ခုမဟုတ်ပါဘူး။ ဆုံးရှုံးမှုသဘောမျိုး တွေ့ကြုံခံစားရတာဖြစ်တာကြောင့် လောကဓမ္မတာကို နားလည်လက်ခံတာ၊ အကောင်းဘက်ကမြင်တာ၊ တရားသဘောနဲ့ ကြည့်တတ်တာက သင့်အတွက် စိတ်ချမ်းသာရာရစေပါလိမ့်မယ်။
မိဘတွေအပေါ် Empty Nest Syndrome ရဲ့သက်ရောက်မှု
မိဘတွေအနေနဲ့ မိမိတို့ရဲ့ ကလေးတွေ ထွက်ခွာသွားတဲ့အခါ ဝမ်းနည်းပြီး အထီးကျန်နေခြင်းက သဘာဝပဲဖြစ်ပါတယ်။ သို့သော် နောက်ဆုံးမှာ အထီးကျန်ခြင်းက မိဘတွေအပေါ် အကောင်း၊ အဆိုးသက်ရောက်မှုတွေ ရှိစေနိုင်ပါတယ်။
-ဆုံးရှုံးမှုကို သိသိသာသာခံစားရတာက စိတ်ဓါတ်ကျစေနိုင်ပါတယ်။ ဒါက identity ပြဿနာတွေ၊ အမူအကျင့်ဆိုင်ရာပြဿနာတွေ (သို့) အခြားသူတွေနဲ့ ဆက်ဆံရေးမှာ ပဋိပက္ခဖြစ်လာတာ၊ အရက်စွဲလာတာတွေ ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါတယ်။
တစ်ဦးချင်းစီရဲ့ အထီးကျန်ဆန်ခြင်းနှင့် စိတ်ဓါတ်ကျခြင်းတွေက သိမြင်မှုဆိုင်ရာ မသန်စွမ်းမှုကို ဖြစ်ပေါ်စေကြောင်း လေ့လာမှုများမှာ တွေ့ရှိခဲ့ရပါတယ်။
မိခင်တွေအနေနဲ့ ယေဘုယျယုံကြည်ထားတဲ့အတိုင်း ရည်ရွယ်ချက်တစ်ခု ဆုံးရှုံးသွားတယ်လို့ခံစားရနိုင်သော်လည်း ဖခင်တွေကတော့ အပြောင်းအလဲအတွက် စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ပြင်ဆင်မှု အားနည်းတာကြောင့် ခက်ခဲသောအချိန်တွေ ရှိနိုင်ပါတယ်။
empty nester ခံစားချက်တွေဟာ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းလုပ်ကိုင်နေတဲ့ အမျိုးသမီးတွေထက် အိမ်အလုပ်လုပ်တဲ့ အမျိုးသမီးတွေမှာ ပိုခံစားရကြောင်း လေ့လာတွေ့ရှိရပါတယ်။
စိတ်ပညာရှင်တွေက မိဘတွေအနေနဲ့ ကလေးတွေနဲ့ ဝေးကွာနေခြင်းဟာ အခြားသူတွေနဲ့ ကိုယ့်ရဲ့ ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးကို တည်ဆောက်ဖို့ အချိန်ကောင်းဖြစ်တာကြောင့် သေချာပေါက် မကောင်းတဲ့အရာ မဟုတ်ဘူးလို့ ဆိုပါတယ်။
စုံတွဲတွေအနေနဲ့လည်း အတူတူအချိန်ဖြုန်းနိုင်သလို သူတို့ရဲ့ relationshipကို ပြန်လည်ရှင်သန်နိုင်ပါတယ်။
ဒါက ဝါသနာတွေ၊ စိတ်ဝင်စားမှုတွေကို ပြန်လည်စူးစမ်းလေ့လာဖို့၊ လူနေမှုဘဝ အရည်အသွေးကို တိုးတတ်စေဖို့နှင့် မိသားစုနှင့် ပြန်လည်ချိတ်ဆက်နို်ငဖို့ အခွင့်အရေးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
မိဘတစ်ချို့ဟာ ဘာ့ကြောင့် Empty Nest Syndrome ခံစားရတာလဲ?
သားသမီးတွေကို လက်လွတ်ရတာက သဘာဝပါပဲ။ သို့သော် အချို့သူတွေမှာတော့ သက်ရောက်မှုကြီးပါတယ်။
မိဘတွေရဲ့အသက်- ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့် ငွေရေးကြေးရေးအရ ကလေးရဲ့ ထောက်ပံ့မှုပေါ်မှာ မှီခိုနေရတဲ့ သက်ကြီးရွယ်အိုမိဘတွေဟာ မှီခိုစရာ ဘယ်သူမမရှိတော့တဲ့အခါ ဒီရောဂါပိုဖြစ်ပေါ်နိုင်ပါတယ်။
မတည်ငြိမ်တဲ့ အိမ်ထောင်ရေး- အိမ်ထောင်ရေးမတည်ငြိမ်တာက မိဘတစ်ယောက်ရဲ့ ဘဝကို သူတို့ကလေးရဲ့ ဝန်းကျင်မှာသာ လည်ပတ်စေနိုင်ပါတယ်။ သူတို့လက်တွဲဖော်ရဲ့ အထောက်အပံ့မရခြင်းက သူတို့ကို အထီးကျန်စေပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် ဒီလိုမိဘတွေဟာ ကလေးတွေကို တွယ်တာလွန်းတတ်ပါတယ်။
identity အသိ- တစ်ချို့မိဘတွေဟာ သူတို့သားသမီးတွေရဲ့ အိမ်စောင့်အဖြစ် သူတို့ကိုယ်သူတို့ မြင်ယုံကလွဲပြီး ရည်ရွယ်ချက် sense ဆုံးရှုံးပါတယ်။ ကလေးတွေရဲ့ လုပ်ဆောင်မှု၊ ဖွံ့ဖြိုးမှုကြောင့်သာ အသိအမှတ်ပြုခံရတယ်လို့ ခံစားတဲ့ မိဘတွေဟာ ကလေးတွေ ရုတ်တရက် အနားမှာမရှိတော့တဲ့အခါ စိတ်ဓါတ်ကျတဲ့ ခံစားမှု ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်ပါတယ်။
ပြောင်းလဲမှုကို လက်ခံဖို့ ခက်ခဲခြင်း- အချို့လူတွေက ပြောင်းလဲမှုကို ရင်ဆိုင်ဖို့ အခက်တွေ့ကြရပါတယ်။ တစ်နေ့မှာ ကလေးတွေကြီးပြင်းလာပြီး လွတ်လပ်တဲ့ဘဝကို ရရှိနိုင်ကြောင်း မိဘတွေသိသော်လည်း အချိန်တန်လာတဲ့အခါ အဲ့ဒီအဖြစ်မှန်ကို လက်ခံဖို့ ငြင်းဆန်ကြပါတယ်။ ကလေးက မျှော်လင့်ထားထက် စောစောထွက်သွားရင် ဒီခံစားချက်တွေ ပိုဆိုးရွားစေနိုင်ပါတယ်။
Single parents- ကလေးတွေ အိမ်ကထွက်ခွာသွားတာနဲ့ သူတို့အချိန်တွေ၊ အတွေ့အကြုံတွေကို အတူတူမျှဝေဖို့ ဘယ်သူမှမရှိတော့တာကြောင့် Single မိခင်(သို့)ဖခင်တွေဟာ စုံတွဲတွေထက် ပိုထိခိုက်လွယ်ပါတယ်။
တခြားစိတ်ဖိစီးစရာ အဖြစ်အပျက်များ- တကယ်လို့ မိဘတစ်ယောက်ဟာ အိမ်ထောင်ဖက်ဆုံးရှုံးသွားတာ(သို့) သွေးဆုံးချိန်ရောက်တာမျိုးကဲ့သို့သော ဇီဝအပြောင်းအလဲများဖြစ်တဲ့ စိတ်ဖိစီးမှုအခြေအနေတွေနဲ့ ရင်ဆိုင်နေရလျှင် ဝမ်းနည်းပြီး အထီးကျန်ဆန်တာ ပိုများပါတယ်။ အမျိုးသမီးတွေဟာ အမျိုးသားတွေထက် ပိုခံစားရတယ်လို့ လူအများယုံကြည်ကြသော်လည်း လေ့လာမှုတွေအရ ထိုခံစားချက်ရဲ့ ပြင်းထန်မှုက အတူတူဖြစ်ကြောင်း တွေ့ရပါတယ်။
မိဘနှင့် ကလေးတွေရဲ့ ဆက်ဆံရေးအရည်အသွေး- များသောအားဖြင့် ကလေးတွေနဲ့ ကောင်းမွန်သော ဆက်ဆံရေးရှိတဲ့မိဘတွေဟာ မိမိတို့ကလေးတွေကို နှစ်ပေါင်းများစွာ ပြုစုပျိုးထောင်ဖို့ တာဝန်ပြီးမြောက်အောင်မြင်ခဲ့တာကို နားလည်တာကြောင့် empty nest သို့ အကူးအပြောင်းက အခက်အခဲနည်းကြောင်း တွေ့ရပါတယ်။ အမှန်ကတော့ ကလေးတွေဟာ မိဘတွေနဲ့ တစ်သက်လုံးနေမှာမဟုတ်ပါဘူး။ မိဘတွေက ဒီအမှန်တရားကို လက်ခံလေလေ သူတို့အတွက် ပိုလွယ်ကူလေဖြစ်ပါတယ်။
မိဘတွေအနေနဲ့ Empty Nest Syndrome ကိုတားဆီးနိုင်သလား?
ဟုတ်ပါတယ်၊ သင့်ကလေးတွေ ထွက်ခွာဖို့ အဆင်သင့်ဖြစ်တဲ့အခါ အသိုက်အမြုံလေး ဟာလာဟင်းလင်းဖြစ်သွားမှာကို သင်စိုးရိမ်ပါလိမ့်မယ်။ ဒါ့ကြောင့် ကြိုတင်စီစဉ်ပါ။ သင့်ရဲ့ ပရော်ဖက်ရှင်နယ်နဲ့ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာဘဝအတွက် အခွင့်အလမ်းသစ်တွေ ရှာဖွေခြင်းဖြင့် ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ပြန်လည်ဆန်းစစ်ပါ။ အရွယ်ရောက်လာတဲ့ ငှက်တွေ သင့်အသိုက်အမြုံကနေ အဝေးသို့ ပျံသန်းသွားတဲ့အခါ ရည်ရွယ်ချက်မရှိသော ခံစားချက်မျိုးမရှိစေဖို့ အလုပ်၊ စိန်ခေါ်မှုအသစ်တွေနဲ့ အလုပ်များနေပါ။
ယခုအချိန်မှာ အထီးကျန်နေပေမယ့်လည်း သင်ဟာ မိဘတစ်ယောက် ဖြစ်နေဆဲဖြစ်ပြီး အဘိုးအဘွားတွေ ဖြစ်လာဦးမှာပါ။ အရွယ်ရောက်ပြီးတဲ့ သားသမီးတွေ၊ မြေးတွေနှင့်အတူ သင့်ရဲ့relationship အပေါ် အမြင်သဘောထားသစ်တွေ လုပ်ဆောင်နိုင်ပါတယ်။ ကလေးတွေနဲ့ စကားပြောပါ။ တစ်စုံတစ်ယောက် လိုအပ်တဲ့အချိန်မှာ နားထောင်ပေးပါ။ သင့်စိတ်ခံစားမှုတွေကို မျှဝေပါ။ ရံဖန်ရံခါ အိမ်ကိုခေါ်ပါ။ သူတို့ဆီသွားလည်ပါ။ နောက်ဆုံးမှာအထီးကျန်တဲ့ ခံစားချက်တွေကို ပယ်ရှားသွားနိုင်ပါလိမ့်မယ်။
လူအများစုက ၎င်းတို့ရဲ့ ရာသီခွင်တွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး စိတ်ဝင်စားလေ့ရှိကြပါတယ်။ တစ်ဆက်တည်းမှာ သင်သတိထားမိမလားမသိနိုင်ပေမယ့် လူတွေရဲ့ မွေးလတိုင်းမှာ ပန်းတစ်ပွင့်စီက ကိုယ်စားပြုကြပါတယ်။ ၎င်းပန်းတွေမှာ ထူးခြားတဲ့အဓိပ္ပာယ်တွေရှိပြီး အဲ့ဒီ့ပန်းတွေဟာ လူတွေရဲ့ ခံစားချက်တစ်ချို့ကိုလည်း ဖော်ပြနိုင်ပါတယ်။ အိုကေ ဒီအချက်ကို သင်စိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုရင်...
ဝက်က ရာသီခွင်ပြက္ခဒိန်ရဲ့ သီးခြားခွဲထုတ်မရသော အစိတ်အပိုင်းဖြစ်ပါတယ်။ ဝက်နှစ်က ရာသီခွင်တိရိစ္ဆာန် ၁၂ခုရဲ့နောက်ဆုံးမှာ ကျရောက်ပါတယ်။ တရုတ်ရာသီခွင်မှာ ဝက်နှစ်ဖွားတွေက ရွင်လန်းမှု ၊ တောက်ပမှုနှင့် ပူပင်ကြောင့်ကြမဲ့မှုစတဲ့ စရိုက်လက္ခဏာရှိပါတယ်။ဝက်သင်္ကတက ဘဝကို ပျော်ရွင်မှုနှင့် ကောင်းကျိုးတွေ ယူဆောင်လာတာကြောင့် ကံဇာတာကောင်းပြီး...
စိတ်ပညာရှင်တွေပြောတဲ့ စိတ်စွမ်းအားကို အပြင်ကရတဲ့ (Extrovert)၊ စိတ်စွမ်းအားကို အတွင်းကရတဲ့ (Introvert) နဲ့ အတွင်းရောအပြင်ကပါ မျှတစွာရရှိ (Ambivert) ဆိုတဲ့ လူအမျိုးအစားသုံးမျိုးထဲက Ambivert တို့အကြောင်းကို ဖော်ပြပေးသွားပါ့မယ်။ Ambivert တို့ဟာ အလယ်အလတ်မျှတတဲ့စိတ်သဘောထားတွေရှိတတ်ကြပြီး အခြေအနေနဲ့...
လောကကြီးမှာ လူအများစုက ညာသန်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့ဒီကြားထဲမှာ ဘယ်သန်လေးတွေကလည်း အဖိုးတန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအဖြစ် ရှိနေပြီး သူတို့လေးတွေဆီမှာလည်း ထူးခြားတဲ့အချက်တွေ၊ ဘယ်သန်တွေအဖြစ်နဲ့ပဲ ရရှိနိုင်တဲ့ အကျိုးကျေးဇူးတွေရှိနေတာကြောင့် ဒီနေ့မှာတော့ အဲ့ဒီအချက်လေးတွေကို ပရိသတ်တွေအတွက် တင်ဆက်ပေးလိုက်ရပါတယ်။ ၁။ ကားမောင်းလိုင်စင်ရတာ ပိုပြီးလွယ်ကူတယ်။ ဘယ်သန်တွေက...